Imigomo Nemibandela | Izinkambo zePlebble zeSand
IMIYALELO YOKUPHAKATHI NEMITHETHO
Wonke amanani aseRussia yaseNdiya.
I-GST 5% isebenza ngenani lemali yenani eliphelele.
Izivakashi zicelwa ukuba zitholwe imoto ngokwazo ngaphambi kokusetshenziswa. Babuye baceliwe ukuba bagcine impahla yabo siqu esitokisini sabo. Asithwali noma yikuphi umthwalo wokulahlekelwa.
Uma kwenzeka uhlobo lwezimoto njengesicelo ngasinye singatholakali ngezizathu ezithile ezingalindelekile, uhlobo olufanayo lwemoto luzohlinzekwa kumvakashi.
Ukubona okubonakalayo kuzoba njengendlela yokuhamba kuphela emigwaqeni ehamba kahle.
Umshayeli angeke aphoqelelwe ukushayela ngesivinini esiphezulu kunomthetho ongaphansi kwe-Indian Motor Vehicle Act.Ukuze ucele ukuba ungangeni ekuhambeni kokuhamba ebusuku.
Ukuze kube lula kangcono kwezivakashi, izivakashi ze-Sand Pebbles Tours zizokhokha ukukhokha Izimali Zokupaka / Izindleko Zokukhokha kanye Nezikhawulo Zemvume Yezinsizakalo Zomphakathi (State-Border Permit Charges) ezizobuyiselwa yiMphathi kumshayeli wezokushayela ekukhiqizeni amaReceip ekupheleni komsebenzi.
Emisebenzini yasendaweni, i-Chauffeur's Night Allowance izokhokhiswa phakathi kwama-22.00 Hrs kuya ku-06.00 Hrs. Zonke ezinye izinkokhelo ezengeziwe okumelwe zikhokhwe kuye ngokheshi ngesikhathi sokusebenzisa.
Ngenkathi ushayela emigwaqweni ye-Ghat, isimo se-Air sizohlala sisusiwe.
Ukuze ugweme i-Traffic-jam kanye nezinye izimo ezingalindelekile ezingabangela ukubambezeleka, isaziso esanele sokunikezwa kwe-Airport / Railway.
Ama-Trip-Sheets adingeka ukuthi asayinwe ngumsebenzisi ukuqinisekisa ukusetshenziswa. Izikhalazo eziqhubekayo azihambelani.
Izivakashi zicelwa ukuthi zihlole ikhwalithi yethu kanye nokusebenza futhi zigcwalise ifomu elithi "Impendulo" ukuze linikezwe yi-Chauffeur, Lokhu kuzosisiza ukuba sikukhonze kangcono.
Izindleko zizophakanyiswa kwiKlayenti / Indwendwe ngaphandle uma kuchaziwe ngokubhaliwe. Imodi yokukhokha kumele iluleke ngokucacile ngesikhathi sokubhuka.
Imithetho ekhokhwayo izonikezwa ku-Fortnight-basis. I-Sand Pebbles ivumela isikweletu esiphezulu sezinsuku ze-15 kusukela ngosuku lokuthola uMthethosivivinywa ngokukhishwa kwesivumelwano. Ukuze ukwandiswa kweMali Yesikweletu se-Credit Time Sand Pebbles kungacelwa ngokubhaliwe okungenani emahoreni angu-48 kokuthola imali.
I-Tariff ngenhla ingaphansi kokumemeza okulinganayo uma kwenzeka ukunyuka kwezindleko ze-Fuel noma i-Govt. Izingxenye zentela.
Ukukhuphuka kwemoto eBhubaneswar kuwukuqonda konke kweSand Pebbles.
Izinkokhelo zingase zixazululwe ngekheshi noma nge-a / c okhokhelwayo Hlola / DD / PO ekhishwe "I-Sand Pebbles Tour 'n' Travels (I) Pvt Ltd."Izinkokhelo zingase zixazululwe yiKhadi leKhadi / RTGS noma i-NEFT (Ukukhokha ngekhadi lesikweletu kuzothathwa nge-3% eyengeziwe).
Ukuze uthole ukukhokhelwa ngeKhadi leMali, iKhadi leKhadi kanye nosuku lokuphelelwa yisikhathi kumele uthunyelwe ngeposi / ngefeksi ngesikhathi sokubhuka. Uma ngabe ukufinyelela kufakwa inhlamba, iKlayenti / Indwendwe yokubhuka kufanele igcwalise ngemali.
Uma inkokhelo ixazululwe nge-RTGS / NEFT, ama-Sand Pebbles kufanele aqondiswe ngemininingwane.
Uma kwenzeka ukukhishwa kwemali ka-Rs.25000.- noma ngaphezulu, ikhophi yekhadi le-PAN leKlayenti / Indwendwe okufanele linikezwe.
Zonke izingxabano zingaphansi kwegunya lezomthetho laseBhubaneswar kuphela.